Bonnie Crater's Articles na Martech Zone |
Edemede site na Bonnie Crater
Ka ndị ahịa na-agbanwe mkpọsa iji zaghachi ọdịda akụ na ụba sitere na COVID-19, ọ dị mkpa karịa ka ị mara otu esi ahọpụta ndị mmeri. Enweta ego elebara anya ga-ahapụ gị ka itinye ego rụọ ọrụ nke ọma.
Nghọta zuru ezu: Mgba Ọkụ na Nhazi maka Salesforce
Mọnde, Febụwarị 11, 2019 Mọnde, Febụwarị 11, 2019 Bonnie Crater
N'ọtụtụ ụlọ ọrụ, ịre ahịa na ire ahịa anaghị arụ ọrụ n'ọkwa egwuregwu. Ọrụ ahịa B2B nwere CRM sistemụ dị ka Salesforce iji tụọ arụmọrụ, gụnyere usoro ụlọ ọrụ zuru oke na nkọwapụta nke otu na arụmọrụ otu. Ebe ọ bụ na usoro CRM na-arụ ọrụ dị ka de facto sistemụ ndekọ maka inweta ego na ọtụtụ ụlọ ọrụ, otu ndị ahịa nwere data nwere ike ikwenye na C-suite. Ndị otu ahịa na-eji azịza azịza dị iche iche akpaghị aka na
Olileanya nke ọgụgụ isi (AI) na-agbanwe ihe niile mepụtara nnukwu mkpọtụ na azụmaahịa ahịa na 2017, nke ahụ ga-aga n'ihu na 2018 na afọ ndị dị n'ihu. Nmeputa ohuru dika Salesforce Einstein, ihe mbu nke AI maka CRM, ga-enye ndi okacha amara ahia ihe omuma ndi a na-enwetaghi ụdị ya, nyere ndi oru nkwado aka idozi nsogbu tupu ndi ahia achota ha ma mee ka ahia hazie ihe omuma rue ogo nke n’enweghi ike mbu. Ihe ndị a bụ ihe na-eduga na a
Tuesday, August 18, 2015 Tọzdee, Nọvemba 5, 2015 Bonnie Crater
Ha na-ekwu na CRM bara uru naanị dị ka data dị na ya. Ọtụtụ nde ndị na-ere ahịa na-eji Salesforce, mana ole na ole nwere nghọta siri ike banyere data ha na-adọta, ihe metrik iji tụọ, ebe o si, na otu ha nwere ike ịtụkwasị ya obi. Ka ahịa na-aga n'ihu na-abụwanye data-na-akpata, nke a na-eme ka mkpa ịghọta ihe na-eme n'azụ-azụ na Salesforce, yana ngwaọrụ ndị ọzọ. Se ntak inan̄